पाकिस्तानलाई दबाउँन खोज्ने अमेरिकी रणनीति असफल ! [इमरान खानको अडानले डरायो भारत] « The News Nepal
पाकिस्तानलाई दबाउँन खोज्ने अमेरिकी रणनीति असफल ! [इमरान खानको अडानले डरायो भारत]
इस्लामावाद । आज भारत र पाकिस्तानका बिचमा नकारात्मक सम्बन्ध रहेको छ । रुससँग हतियार खरिद गरेर अमेरिकासँग दुरी बनाएको भारत अहिले लोकसभा निर्वाचनले तनावमा छ ।
यसैं बिच अमेरिकाले अफगानिस्तानको युद्ध अन्त्यका लागि वार्ताको पहल गरिदिन आग्रह गर्दै अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई पत्र पठाएका छन ।
पाकिस्तानले आफुले आतंकवादलाई बढाउने काम नगरेको जिकिर बेलाबेलामा गर्दै आएको छ । पाकिस्तानका विदेश मन्त्रीले सोमबार दिएको जानकारी अनुसार ट्रम्पले अफगानिस्तानको समस्या समाधानका लागि पत्रमा विषेश चासो व्यक्त गरेका छन ।
अफगानिस्तानमा १७ बर्षदेखि जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्न शान्ति वार्ता मार्फत् प्रभावकारी कदम चाल्न पनि अमेरिकाले आह्वान गरेको छ ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खनले आफुले सबैं देशहरुसँग राम्रो र समधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको बताएका छन ।
पत्रमा ट्रम्पले अफगानिस्तान समस्या समाधान गर्ने विषयलाई आफुले अत्यन्त महत्वपूर्ण रुपमा लिएको र प्राथमिकतामा पारेको पनि जानकारी दिएको जनाइएको छ । “यो कामको लागि पाकिस्तानले महत्वपूर्ण भूमिका र सहयोग गर्न सक्दछ, त्यो अपेक्षा गरिएको छ,” ट्रम्पले पठाएको पत्रमा लेखिएको छ ।
ह्वाइट हाउसले अफगानिस्तानका तालिवान लडाकूहरुलाई पाकिस्तानको आन्तरिक सेवा गुप्तचर निकाय र अन्य सैन्य निकायहरुले सहयोग गर्दै आएको ठानेको छ ।
भारतलाई दवावमा पार्नका लागि पाकिस्तानले अफगानी तालिबान लडाकूलाई सयोग गरेको अमेरिकाको बुझाई रहेको बताउने गरिन्छ । अमेरिकाले पाकिस्तानमाथि दबाब बनाउँनको लागि निरन्तर दिदैं आएको सहयोग पनि रोकेको छ ।
जसले हिजो उत्तर कोरियाले देखाएको व्यवहार आजको दिनमा पाकिस्तानले अमेरिकामाथि देखाइरहेको ब्याख्या भइरहेको छ ।
अब देख्न बाँकि रहेको कुरा के हो भने हिजो पाकिस्तानलाई आफुनुकुल बनाउँन लागि परेको अमेरिका अन्नत झुक्नु परेको छ । पाकिस्तानलाई आतंकवादको अखडा सावित गर्न लागि परेको भारतका लागि यो कुरा के सिद्ध हुने हो आज संसार त्यतातर्फ हेरिरहेको छ । पाकिस्तानले पटकपटक शान्ति वार्ताको अपिल गर्दा पनि भारत वार्तादेखि भाग्न खोजिरहेको छ । एजेन्सीको सहयोगमा